Marka Jaceyl lagalo Waa Sidee Dareenku
Jaceylka isku si uma dareemaan dadka oo dhan. Adiga kaliya ayaa ka jawaabi kara waxa uu jaceyl kuu yahay.
Waxaa jira filimaan badan, qoraalo heeso ah, buugag iyo daabacaad badan oo ku saabsan jaceyl. Inta badan dadka waxey rabaan in jaceylka u muujiyaan qaabka iyaga gaarka u ah.
Waxaa laga yaabaa iney kala duwaanaatoJaceyl la galo dareema kala duwan ayey yeelan kartaa marar badan. Inta badan si ka duwan ayey noqotaa marka aad muda ku jirtay jaceyl, oo ka duwan marka aad ku hor leedahay.
Waxaa laga yabaa in farxad iyo murugo uu lahaado. Waxaad dareemi kartaa xanaaq, geesinimo, farxad ama waad deganaan kartaa. Waxaa laga yaaba inaad aad uuga hesho qofka aad jeceshahay. Waxaa laga yaabaa iney kuugu adkaato inaad ka fakarto wax kale. Mararka qaar waxaad dareemi kartaa walwal, xanaaq ama maseyr markaad jaceyl gashid. Dadka qaar wey ku adag tahay iney wax cunaan ama seexdaan marka ey jaceyl galaan.
Inta badan aad bey u fiican tahay inaad ku dhawaato qofka aad jaceylka kula jirtid. Ka dib waxaa laga yaabaa inaad dareento in wadnaah uu aad u garaacmaayo. Waxaa laga yaabaa inaad dareento walwal, farxad, xishood ama kacsi.
Jaceylku wuxuu lahaan karaa waxyaaba lama filaan ahWaxaa laga yaabaa inaad jaceyl la gashid qof aad taqaano, ama qof aadan aqoonin. Dareenka aad buu u ficnaan karaa, xitaa haddii aadan wada kulmin ama wada joogin. Waxaa laga yaaba inaad jaceyl kula jirto dad badan isla wakhtigoo.
Jaceylku lama filaan ayuu kuugu noqon karaa. Tusaala, haddii aad jeclaato qof jinsi duwan ah sidaas oo ka duwan dareenkaadii hore. Jaceylku wuxuu lahaan karaa waxyaaba lama filaan ah. Waxaa laga yaabaa inaad jaceyl la gasho qof aad u maleynin inaad jeclaan laheyd.
Wey adag tahay inaan ogaano waxa aan jeclaaneyno. Waxaa laga yaabaa iney tahay qofka xaaladdiisa muuqaal, codka ama shiirkiisa iney nasoo jiidato.
Sideen ku muujin karaa jaceylkeyga?Waa kuwaan talooyinka qaar. Xulo shey kuugu fiican. Haa sameynin wax qariib kuugu ah ama aan kuu ficneyn.
U sheeg qofka aad jeceshahy. Waad u sheegi kartaa haddii aad kulantaan ama fariin ayaad u diri kartaa.
Hubso inaad ku dhawaad qofka marka aad kulantaan. Indhahaada ka fogeey sida caadiga haddii indhahiina ey isku dhacaan. Dhoola cadeey haddii aad u baahto.
Wax fiican sheeg. Waxaa kuugu filan inaad tirahdo "Waan ka helay aragaada" ama "Funaanad fiican" ama wixi la mid ah. Dadka intooda badan wey ku farxaan ammaanta. Waxaa laga yaabaa iney ka bilaabato wadahadal badan.
Weydii haddii aad si wada jir ah wax isula sameyneysaan. Ama labadiina kaliya, ama idinkoo la joogto asxaab. Ka dib qofka si fiican ayaad u baran kartaa waxaadna lahaan kartaa fursad aad dareenkaada ku muujiso.
Haddii inta badan aad wada joogtaan, muuji inaad qofka aad jecehshay. Weydii haddii aad xabadka saari karto, ku casuum cunno fudud ama qaxwa ama wax ku caawi. Samee waxa dareen fiican ku siinaaya adiga.
Qaada caawinaadda asxaabta. Qof kala ayaa kuu sheegi kara qofka aad ka heshid.
Dadka badoonkoodu wey farxaan marka ey ogaadaan inuu qof ka helo. Waxaa jira fursad aad ku ogaato in qofka uu kaa helo haddii aad muujisid dareenkaada.
Sideen ku ogaan karaa inuu qof i jeclaaday?Dadka qaar si cad ayey u muujiyaan marka ey qof jecel yihiin. Dadka qaar iyaga isku reeba dareenka. Tusaalooyinka qaar oo aad ka dareemi karto haddii uu qofka kaa helo:
Qofka aad ayuu kuu fiirinayaa.
Qofka wuxuu inta badan jecel yahay inuu kuu dhawaado, deeqsi ayuuna kuu yahay wuxuuna isku dayaa inuu saaxib kuu noqdo.
Qofka wuxuu isku dayaa inuu kaa qososhiiyo.
Qofka wuxuu u eg yahay inuu kaa xishoonaaya ama markuu kula joogo uu walwalsan yahay.
Waxey isku dayaan iney isku dejiyaan ama kuugu adkaadaan.
Waxey isku dayeysaa iney aad kuugu fiicnaato markaad kulantaan.
Dhab ahaanti wey fiican tahay inaad weydiisato haddii aad rabto inaad ogaato inuu qof ku jecel yahay. Adiga naftaada ayaa qofka weydiin kara ama saaxib ayaa kuu weydiin kara. Waxaa laga yaabaa inaad ka cabsato inaad weydiiso. Laakiin way fiican tahay inaad ogaato.
Jaceyl nasiib daranSida qaalibka ah, wey adag tahay haddii qofka aad jeceshahay uusan adiga ku jeclayn. Mararka qaar jaceylka waa lagu dhibboodaa. Wuxuu leeyahay khibarado iyo dareema badan.
Ma xakameyn kartid dareenka dadka kala, mana ku qasbi kartid qof kale inuu ku jeclaado. Haddii uu qofka ku jeclayn, micnaheeda ma aha iney wax kaa haleysan yihiin. Laakiin waxey sidaa tahay mararka qaar oo kale.
Wey fiican tahay inaad xanaaqdid. Siu roonow. Samee waxyaaba aad jeceshahay. Isku day inaad hilmaamtid waxyaabaha ku soo xusuusinaaya qofka aad jeceshahay, sida heesaha ama sawirada qofkaas ku soo xusuusinaaya.
Dareenkaada u sheeg saaxiibkaa ama qof weyn ood ku kalsoon tahay. Waxaa laga yaabaa inaad si fiican dareentid. Dad badan ayaa sidoo kale dareema iney wax ka qoraan sida ey dareemaan. Dareemaha kuwa uugu adag inta badan wey iska baxaan muda ka dib.
La hadal asxaabtaada dugsiga ama qof jooga goobta qaabilaadda dhalinta, haddii ad aad u xanaaqsan tahay aadna si xun dareemeyso.
Ha isu qurxin Ninkaaga!!
Waxaan hubaa markaad ciwaanka maqaalka aragtayba inaad la yaab tay oo aad Su'aalo badan isa Su'aashay intaadan akhriyin fariinta ku jirta maqaalka, hadii aad sidaa samaysay Waad fiican tahay oo sidaan rabay weeye, HAA ha isu qurxin ninkaaga hadii ay ku gaadhsiinayso is qurxintaasi, inaad jidhkaagii kiimiko ku gubto ama aad midabkaagii dabiiciga ahaa aad badasho adoo xujo ka dhiganaya, Nimanka Soomaaliyeed waxay jecel yihiin dumarka cad cad, adigoo raacaya hadalada aan qiimaha laheyn ee kasoo fula kuwo badan oo dumarka kamida, iyagoo ku andacoonaya habeen iyo doqonbaa madoobe _Naa maxaa qeyrkaa kaa reebaya, Naa ma maqashay Kareemka cusub ee soo baxay wiig gudihiiba wuxuu kaa soo saarayaa muraayad la isku daawado.
Wiig kadib, Waxay soo baxday gabadhii iyadoo wajigeeda aad moodo in diirkii laga soo siibay, Gacmaheeda iyo jidhkeeda inta kale markaad aragtana waa midabkeedii dabiiciga ahaa, Waxay u ekaatay wax aan la garan karin oo qofkasta oo damiir lihi uu ka xumaanayo, Hadaba quruxda uu rabay ninkaagu ma sidanaa, Isu jawaab adigu.
Ha isu qurxin Ninkaaga 3dexda bilood ee aad isku cusub tihiin hadii is qurxintaadu ay tahay mid ka badbadisa oo 24 saacadoodba aad ku mashquulsan tahay kaliya sidii aad isu qurxin lahayd, Dadkii kula soo taliyey waxay kaasoo dhaadhiciyeen markasta adoo dhalaalaya oo udgoon kaasoo Carfaayo waa inuu ku arkaa, Maalintii waa inaad dhawr labis oo kala wada daran aad xidhataa, Gacmahaaga oo aan xinaysnayn yuuna ku arkin, Cuntaba cuntada ay ka macaan tahay waa inaad kasoo tuurtaa, Guriguna waa inuu giijisnaadaa markasta, OK OK OK hadii aad raacday Waanadaas waa su'aale goormaad wakhti isu heshaa adigu goormaad si raaxo le aad u cibaadaysataa.
Goormuu ninkaagu ku arkaa adigoo qof caadi ah, Ninkaaga u ogolow inuu kugu arko adoo labisan, adoo soo toosay oo wajigaaga laga cararaayo, adoo dhididsan oo aan diyaar ahayn si uu kuula qabsado ninku, Marka aad tustay 3bilood adoo markasta giijisan saw ma ogid bari markaad daasho inuu markasta kaa sugayo sidii uu kaaga bartay, Taasina waa dhibatada kala haysata maanta qoysas badan oo soomaaliyeed, Sababta keentayna waa gabadhii oo wixii ay awood haysay oo dhan saartay bilaha hore ee guurka, Markay kadaashayna oo wixii looga bartay ay awoodi waydayna noqotay haweenay aan iska shaqayn oo aan danba ka lahayn markuu ninkeedu ag joogo, Iyadoo aan ihtimaamba siinayn isagii, Waa ninkii ay shalay 24ka saacadood isu qurxinaysay, Waxaasoo dhana maxaa keenay way daashay oo waxay ku daashay inay ka badbadisay wixii laga badbadiyaana wuxuu ku danbeeyaa in hadhow laga caajiso.
Ha isu qurxin ninkaaga hadii isqurxintu ay kaa tahay isaga isu qurxi oo ayna naftaadu ku raaxaysanayn inaad qurux badnaato.
Dumar badan waxaa caado u noqotay in marka ninkeedu ka agdhow yahay kaliya ay iska shaqayso, Markuu soo dhaw yahay ayey ku dhaqaaqayaan inay is nadiifiyaan sababtoo ah quruxdiiba waxay mooday in isaga la isu qurxiyo kaliya, Iyadoo ilowsan hadii ay nafteeda barto in markasta oo ay is qurxinayso inay isu qurxiso nafteeda in ayna waligeed ka daalayn is qurxinta, Qofku markuu isagu naftiisa isu qurxiyo oo uu ku raaxaysanayo quruxdaa, Waxaa hubaala inuuna marna ka daalayn oo ay u noqonayso wuxuu joogto u sameeyo, Markase ay isu qurxinayso qof kale raali gali, Bas waxaa hubaala inay markasta oo uu soo dhaw yahayba ay sii karaahiyeysan doonto.
Hadaba gabadhii soomaaliyeedeey is bar inaad naftaada isu qurxiso intaadan isaga isu qurxin, si ay kuugu noqoto shay caado kuu ah ninkaaguna uuna isa su'aalin maxay quruxdii ku nacday gabadhii saan ogaa ahayd.
Hadalkayga waxaan kusoo xidhayaa isu qurxi ninkaaga markasta oo is nidaami, si reerkaagu kuugu badbaado, Markasta oo aad is qurxinaysana ogow inaad xaq u leedahay adna in la isu kaa qurxiyo Sidaa darteed dalbo adna si aad u dareento in adigana la isu kaasoo qurxiyey, Taasi waxay kuu keenaysaa inaadan ka caajisin mustaqbalka, is barna inaad marka hore iyo marka danbeba aad adigu naftaada isu qurxiso si ay kaaga caawiso hadhow inaadan ka gaabin.
Ugu danbeyntii waligaa haka badbadin oo u ogolow in lagugu arko dabeecadaada caadiga ah, adoon iloobayn inaadan iyadana ka badbadin oo aadan odhan, Maxaan kii isagu qurxin, Kadibna adoo basal iyo caanihii caruurtu kaasoo urayaan aadan soo garab jiifsan.
Afar qof ayuu ubaahan yahay ninkaagu inaad unoqotid.
Iyadoo ooyaysa ayey soo gashay oo hadlaysa, iyadoon la fahmayn waxay leedahay.
Waxaan ku iri: isdaji oo si tartiiba iigu sheeg aan fahmo waxa kugu dhacaye.
Way fariisatay anoo raba inaan fahmo mushkiladeeda, waxaan maqlay iyadoo leh, khaa'inku, jacaylkii oo dhan ayuu iloobay,, Markuu ubaxii dhalinyaranimadaydu ku dhamaaday saan ugu shaqeenayey oo uuga rabeenayey ciyaalkiisa, iyo?..iyo?.iyo?
Waxaan ku iri: kadibna??
Waxay tiri : wuxuu rabaa inuu guursado mid kale.
Saacado sidaan isugu dayey inaan dajiyo, markay dagtay ayaan ku iri: intaad ooyeysid oo barooranaysid miyaad isku dayday inaad naftaada waydiisid sababta uu u guursanayo?? "Waayo ayuu tukale u aadaya isagoo ku jecel oo kaa maarmi karayn??
Miyaad iswaydiisay sababta uu ilaahay ubaneeyay inuu guursado afar dumar? Sabatoo ah si uu udago si nafsiyan iyo jir ahaan.
Waxay tiri: hadaba miyaan iska ogalaada oo maku qancaa arinta??
Waxaan ku iri: maya ee adigu u noqo afarta dumarka ee uu ubaahanyahay, hadaad rabtid inaad isaga kaligaa yeelatid.
Waxay tiri: sidee??????
Waxaan ku iri: nimanku waxay jecelyihiin afar nooc oo ka mid ah dumarka..
Ta kobaad: "Hooyada Wuxuu jecelyahay hooyada naxariisteeda, iyo wax bixinta bilaa xuduuda ah, "Hooyadu wax bixisa ee aan mana sheegesho ku jirin iyo dhib.
Wuxuu rabaa sida hooyada u laab furan ee saamaxda markuu qaldamo, Dhiiri galisa oo kor uqaada markuu hoos udhaco, "Ka farxisa markuu dhib ku jiro, gacantiisana haysa markuu farxad iyo murugo ku jiro.
Way dhafartaa markuu xanuusanayo iyo markuu shaqo ku jiro iyodoo udhoola cadaynaysa, "Way faraxdaa markuu soo galo, wayna walwashaa markuu soo daaho, "Hooyadii ayuu tabaa guurka kadib, wuuna uxiisaa markuu ubaahdo.
Ta labaad: "xabiibad Wuxuu rabaa xabiibad caashaqsan, qalbigiisa xaday oo qaadatay, Wuxuu rabaa mid cayaar badan, kaga yaabisay quruxdeeda iyo cadarkeeda, iyo dumarnimadeeda.
Wuxuu rabaa mid sariirta kaga farxisa, una bogo cadarkeeda iyo qaabkeeda & hadalkeeda, "Wuxuu rabaa mid ku dhalaasha gacmihiisa cishqi iyo xiiso iyo holac dartood .
Ta sadexaad: "Saaxiibad Wuxuu rabaa saaxiibad uu usheegto hamigiisa, mid uu latashto arimihiisa, "Wuxuu rabaa saaxibad sirta xifdida, ceebihiisa asturta, aysan usheegin saaxiibadeed iyo dariskeeda ama ehelkeeda.
Wuxuu rabaa caqligaaga, xikmadaada, taladaada, marabo hadal bahdilaada oo muhiim uma aha, "Wuxuu rabaa inuu hadlo, adiguna si fiican u dhagaysatid, iyo inaadan hadalka ku badin calaacalka aad ka cabanaysid guriga iyo caruurta, kadibna uu raadsado guri kale oo aamusan, ama uu baxo oo waqtigiisa badanaa la joogo asxaabtiisa ee fahmaya oo dhageysanaya isaga.
Ta afaraad: "Mid ushaqeesa!.. Haa wuu ubaahanyahay khadaamad, "Wuxuu rabaa inaad gacmahaaga ugu sameysid cuntada, xitaa hadaad leedahay shaqaalooyin, "Wuxuu kaa rabaa inaad ukala habeeysid alaabtiisa, "Wuxuu rabaa in dhinac walba inuu ka dareemo inaad gacmahaaga ku sameysay, "Wuxuu rabaa inaad ihtimaam siisid dharkiisa iyo muqaalkiisa, muqaalkaaga iyo muqaalka caruurta.
Malihi arintu way fududahay, laakiin wuxuu ufududyahay qofkuu Ilaahay ufududeeyay, Ilaahay kaalmayso, hana ka caajisin.
Isaga lafariiso, oo u qiro inaad ka gaabisay xaqiisa oo aad rabtid inaad hada wax hagaajisid, bog cusubna aan bilaabno, oo uu kaa arki doono wuxuu rabo.
Sidaa waa hadaad rabtid inaad yelatid isaga kaligaa, una noqo afar dumar ku jira hal jir, mid milkiday caqligiisa, qalbigiisa, ruuxdiisa.. in shaa Allaah.
Waxaa hubaala in qofba qaab iyo nooc u khaasa uu u cabiro jacaylkiisa uu u qabo qof ama cid kale, cida kale waxay noqon kartaa qof banii aadama oo lamida, xayawaan uu jecel yahay ama shay la taaban karo oo aan naf lahayn sida guriga iwm.
Halkan waxaan kusoo koobi doonaa 5nooc oo uu qofku ku cabiro jacaylkiisa khaasatan marka uu tusayo jacaylkiisa qof uu jecel yahay..
1) Ficil: "Dadka jacaylkooda ku cabira ficilkoodu waxay noqon karaan dadka u dhaqma sidan, Xaaskiisa markuu rabo inuu tuso jacaylka uu u qabo wuxuu u qabtaa hawlaha ay jeceshahay inuu uqabto oodhan, ninkeeda waxay u karisaa cuntada mida uu ugu jecel yahay iyadoo u raacisa inay isu qurxiso si uu jecel yahay iwm.
Hadaba hadii aad ka mid tahay kooxdan jacaylkooda ku cabira ficilkooda waxaa fiican in aad lamaanahaaga dareensiiso in jacaylka aad u qabto uu tusaale ka yahay ficilkaaga, Waxaa dhacda marar badan in kooxdani ay la kulanto is afgaran waa ka yimaada dhinaca kale iyagoo ku an dacoonaya in lamaanihiisu uuna waligii ku odhan waan ku jeclahay iwm.
2) Kalmad: "Dadka jacaylkooda ku cabira hadalkoodu waxay noqon karaan dadka u dhaqma, Markasta wuxuu lamaanihiisa ku dhahaa “waan ku jeclahay” “macaaneey/macaanoow waan kuu xiisay maanta, “markasta waan kugu fikiraa” “noloshayda adaa ugu muhiimsan” iwm.
Maadaama oo ay kooxdani jacaylkooda ku cabiraan hadal uma baahna inay u sheegaan lamaanahooda waxay dareemayaan, maadaama oo ay kalmad ku cabireen. Waxaa dhacda in kooxdani ay la kulmaan is af garanwaa ka yimaada dhinaca kale iyagoo ku andacoonaya, jacaylkaagu waa hadal bilaa ficil ah.
3) Taabasho: "Dadka jacaylkooda ku cabira taabashadu waxay noqon karaan sidan, Markasta oo uu lamaanihiisu soo ag-maro wuxuu isku dayaa inuu dhunkado, laabta ku qabto, jidhka u duugo, wakhti kasta wuxuu jecel yahay in uu taa taabto lamaanihiisa si ay ahaataba iwm.
Hadaba hadii aad ka mid tahay kooxdan jacaylkooda ku cabira taabashadu waxaa fiican in aad lamaanahaaga dareensiiso in jacaylka aad u qabto uu tusaale ka yahay sida aad u taabato jidhkiisa, Waxaa dhacda in kooxdani ay la kulmaan is af garanwaa ka yimaada dhinaca kale iyagoo ku andacoonaya, in taabashadaadu ay badatay oo ayna xuduud lahayn wakhti munaasaba iyo mid aan munaasab ahaynba.
4) Wakhtiga: "Dadka jacaylkooda ku cabira wakhtigu waxay noqon karaan sidan, Waa dadka wakhtigooda qaaliga ah u quudhay inay siiyaan kuway jecel yihiin, wuxuu jacaylkiisa cabiraa wakhtiyo uu isagu u arko inay fiican tahay, wuxuu ihtimaamka siiyaa wakhtiyo khaasa oo xasuus leh inay wada qaataan la maanihiisa, wuxuu xasuustaa markasta wakhtiyadii ay soo wada qaateen xasuuso wanaagsan, wuxuu kusii fikiraa oo uu sii qorsheeyaa wakhtiga kale ee uu u arko inay munaasab tahay sida dalxiis iwm.
5) Hadiyad: dadka jacaylkooda ku cabira hadiyadu waxay noqon karaan sidan, Waxay isku taxalujiyaan sidii ay lamaanahooda ugu keeni lahaayeen hadiyadba mida ay ka qurux badan tahay mida kale, kama fikiraan lacagta iyo qiimaha ay bixinayaan mar hadii ay kaga farixinayaan lamaanahooda, markasta oo uu arko wax cajabiya oo qurux badan wuxuu ku fikiraa sidii uu ugu iibin lahaa lamaanihiisa, hadii uuna hayn lacagna wuxuu isku dayaa inuu u uruuriyo si uu ugu iibiyo mar ay ahaataba.
Ha u sheegin sirtaada NINKAAGA...!
Dabcan waxaad is waydiinaysaa oo hadii aan ninkayga ka qariyo sirtayda maxaan kala joogaa, qaarkale waxay odhanayaan oo waaba khiyaamo hadii uu isagu sirtiisa ii sheegto ana aan tayda ka qarsadee.
Dhamaan way wada saxan yihiin oo ninkaagu hadii uuna isaga noqon saaxiibkaaga aad ku sir qarsato in lawada joogaba maaha waayo dadku marka ay sirtooda kala qarsadaan waxaa yaraada kalsoonida ay isu qabaan.
Hadaba sirta aan rabo inaan kaga hadlo maqaalkani waa sirkale oo aan kula talinayo gabadh kasta oo walaashay ah, gabadh kasta oo nolosha guurka gashay ama ku guda jirta inay guursato.
HA U SHEEGIN ninka oo HA USHEEGIN intii nin ee aad shukaansi lasoo samaysay markaad guurdoon ahayd, si kasta oo uu kuugu soo celceliyo oo uu kuu waydiiyo HA U SHEEGIN oo ha kala sheekaysan MARNNA.
Sababta aan sidan kuu leeyahayna waxa weeye, maalinta u horaysa ee aad u sheegto waxaad ogaataa inuu markiiba shaki iyo su?aalo qalbigiisa galeen, taasina waxay ku keentaa cuqdad iyo kalsooni dari uu kuu qaadayo.
Waxaa lagayaabaa inaad dhahdo oo saw ma oga inuuna ahayn ninkii u horeeyey ee guur iga dalba, HAA wuu ogyahay wuuna la socdaa inaad shukaansi soomartay, marka uuse ku su?aalayo ama uu ku leeyahay iiga sheekee OGOW in sheekadu ayna ahayn sidaas, Gabdho badan iyagoo iska daacada markay uga sheekeeyaan waxay isla markiiba ku baraarugaan ninkii oo ka gaagaabsaday ama shaki iyo dabeecado kale lasoo baxay.
Waxaa dhacda in xataa nin muslima oo si walaaltinimo ah kuu salaama inuu kaaga shakiyo hadhow oo uu isa su?aalo tolow nimankay lasoo sheekaysan jirtay miyaa..
Hadaba walaal macaaneey ka DIGTOONOOW inaad ninkaaga uga sheekayso noloshaadii shukaansi, adiguna haka waraysan oo ha qodqodin noloshiisii shukaansi waayo wax faa'iido ah oo ay kuu keenaysaa ma jirto, shaki iyo cuqdad aan loo jeedin ha isu keenin isagana ha ku beerin.
Hadii aad xaaraan hore ugu soo dhacday oo ninkaaga ka hor aad cidkale lasoo samaysay arimo xaaraana, Waxaa jira gabdho xaaraan hore ugu soo dhacay kadibna ka toobadkeenay oo uu Ilaahay swt u ceeb asturay, marba hadii Rabigaa uu kuu ceeb asturay oo ayna cidna ku ogaan xataa ninkaagu uuna dareemin arintaa MAXAAD ISU CEEBAYNAYSAA adigu oo aad ugu sheegaysaa inaad xaaraan hore ugu soo dhacday, khiyaamo maaha walaaleey markaad ninkaaga ka qarisay taas, danbina kuguma aha, Ilaahay wuu ku asturaye walaal AFKAAGA XIDHO oo sirtaadasi ha ahaato mid qabriga kula tagta.
Hadii aad isleedahay qofkii aan xaaraanta la sameeyey aarmuu isheegaa, ogow walaal qofna Ilaahay swt ma ceebeeyo ilaa uu isaga is ceebeeyo, markaa ogow marba hadii aad toobad wanaagsan keentay in cid ku fadeexayn kartaa ayna jirin.
Hadal waxaan kusoo xidhayaa, hadii aad rabto inaad ceebawdo oo lagaa shakiyo ninkaaga uga sheekee intaa aan kasoo hadlay oo dhan kadibna natiijada kaasoo gaadha ha iisoo sheegin.
Waa adag tahay in la helo guri Soomaaliyeed oo ay taaban dhibaatada furiinka.
Haduu qofka si toos ah aanu taaban, waxay taabatay qaraabadiisa, jiiraanka ama saaxiibkii, Waxaa kaloo ayaan daro ah in badanaaba kuwii is furay ay ka shalaayeen furiinkoodi oo ay cadaynayaan inay ku degdegeen oo aanay waqti siinin.
Waxaad arkaysaa in qofkii furiinka ku degdegay oo raadinaya Caalim qiil u helo sidii u soo ceshodo xaaskiisa.
Dhibaatada ugu weyn oo jiraa waxay tahay, dhalinyarada soomaaliyeed oo badanaa aqal gala iyagoo cilimi u lahayn xilka, xuquuqda iyo waajabaadka saaran.
Runtii, waxaan aad ugu baahanahay in dhalinyarada inta aysan aqal galin loo sameeyo barnaamijyo lagu barayo xilka iyo waajibaadka saaran si loo horumariyo xiriirka labada qof oo aqal galaya loona helo “Al Mawaddah”.
Furiinka arin sahlan ma aha, taasna waxaa cadayn u ah, Suurada (Al-Dhalaaq) ee qur’aankeena kariimka ah waa suurada ugu badan kalimada (Alle Ka Baqa- Ittaqullaah). Ibliisna waa (cadowgeena ugu weynaa) wuu ogaaday sida kala gaynta labada is qaba ay mujtamaca u burburinayso.
Taasna nabigeena suubanaa ayaa nooga digay Xadiiska Jabir (Imam Muslim, no:5032) wuxuu sheegayaa in Ibliis carshigiisa dhigay bada dhexdiisa uuna ciidankiisa meesha ka dira siday u lumiyaan dadka.
Midka ugu darajada sareeyaana oo Ibliis aad uso dhowaysto waa kan ku guulaysta inuu nin iyo xaaskiisa kala geeyo.
Hadaba tan micnaheeda ma aha in furiinkoo dhan uu xun yahay ama aysan banaanayn. Dabcan waa jiraa furiin lagu najaxay (uu dhibka aad u badnaa) oo labada kala tagtay iyo caruurtooda ku nasteen.
Waxaa la diidayaa furiinka lagu degdegaayo ayadoo xal la heli karo, badanaana furiinka mujtamaceena kuwaasaa ugu badan.
Hadaba hadii soo koobno furiinka mujtamaca waxay u saamaysaa sida soo socota:
.Reerihii labada qofood ay ka dhasheen iyo asxaabtooda ayaa colooba gaar ahaan haduu furiinka uu ahaa mid aargoosi ah oo aan lagu dhameyn si nabad ku jirta, Tanina waxay usii kordhisaa xanuunka labada qofood is furay.
.Caruurta qaarkii waxaa dhacda in isbedelka weyn reerkooda ku dhacay, ciilkii iyo calool xumada dartii in ay aadaabtooda is bedesho oo ay kacaan dambiyo kala duwan taasoo suura galinaysa in xabsiga loo taxaabo, Waxbarashada caruurta oo hoos u dhaca, Caruur badan oo rikoorkooda waxbarashada ahaa mid aad u sareeyaa furiinka ka hor ayaa markiiba hoos u dhaca murugada dartiisa.
Waxaa kaloo jirta caruurta arkay furitaanka waalidiintooda waxay saameyn ku yeelanee mustaqbalka guurkooda dambe.
Cilmi baaris lugu sameeyay caruur fara badan oo waalidiintooda kala tageen ayaan waxay tustay in dhibaatooyin ay kala kulmeen guurkooda uuna furiinkooda badnaa.
.Labada qofood ee kala tagay, furiinka ka bacdi saameyn weyn ayay ku yeelataa noloshooda cusub, Fikirkooda iyo murugadooda wuu bataa oo waqti ayay ku qaadataa intay noloshooda caadi ku soo noqonayso, Anagana waa nagu waajib inaanu caawino oo aanu daryeelno inta ay ka soo kabsadaan.
Sida aan u yarayn lahayn furiinka micnadarada laysku furaayo ayadoo xal la heli karo waa mas’uul anogoo dhan na wada saaran.
Qof walbo ha ahaado Lamaanayaasha, Waalidiinta, Saxiibada, Jiiraanka,ugaasyada, Jaaliyadaha dibada ee soomaaliyeed, dawlada iyo hay’adaha warfaafinta ay soomaalidu leedahay sida TVga, wargeysyada iyo Websiteyada IWM, haday cid kasta doorkeeda ka ciyaarto ka hortaga dhibaatadani, waxaa hubaal ah in aan guul ka gaari doono. Ilaahayna qowmku ma bedelo ilaa ay ayaga iska bedelaan, Ugu dambayntii, waxaan hoos ku soo koobaynaa talooyin lagu xalin karo mashaakilaadka ina haysta Lamaanayaasha iyo Reerkooda
Aqri oo faham xilka iyo waajibaadka ku saaran, Inta aadan guursan ka hor waxaa haboon inaad ogaato mas’uuliyada ku saaran, markaad guursatidna wali aqriska iyo barashada waa furan tahay. Warbixin badan oo ku saabsan arimaha guurka ayaa jira sida muxaadarooyinka (YouTube), buugaag iyo Websiteyada oo aad ka helaysid maqaalo soomaaliyeed.
Ogow: in mashaakilaadka guurka uu qof walbo taabto oo aan kaligaa ahayn, Xitaa nabigeena suubanaa ayay taabatay markii xaaskiisa uu ugu jeclaa Caa’isha lugu been abuurtay ilaa #Ilaahay qur’aankiisa kusoo dajiyo uu ku bari yeelay caa’isha. Waxaa muhim ah kaliya in aad si wanaagsan u wajahdo dhibka jira.
Waalidiinta: Fadlan markaad caruurtiina dhex joogtaan tusa oo ha arkaan ixtiraamka iyo kalgacaylka adiga iyo xaaskaga idinka dhexeeyo,Tani waa waxbarashada ugu fiican oo saamayn fiican ku yeelanayso caruurtaada markay weynaadaan oo ay guursadaan.
Labada qofood oo kala tagay: Runtii ma sahlana kasoo kabsashada amarka dhacay, qalbiga kheyr u sheega, Iska cafi ninkaada ama naagtaada hore iyo waxaa ka sii muhiimsan inaad qalbiga raacraacin oo aad adiga laftaada iyo dad kaleba eedin.
Markaa xanaaqsan tahayna, ninkaaga ama naagtaada hore haku ceyin oo ha ku lacnadin caruurta hortooda oo saameyn xun ayay ku yeelataa caruurta,
Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Dibada:
Qabanqaabiya: barnaamijyo lugu barayo dhalinyarada guursanaysa rag iyo dumarba xilka iyo waajibaadka saaran qof walba iyo siday u wada hadli lahaayeen haduu dhibaato soo foodsaaro. Si ayan ugu baahanba inuu dad kale soo dhex galo.
Sameeya: koox khibrad u leh habka wax loo maslaxeeyo oo ka hawl gala maslaxaynta labada qof ee khilaaf dhexdooda jira. Iyo in la caawiyo labada kala tagay oo calafkoodi dhamaaday inta ay noloshooda caadi ugu soo noqonayso.
Ku dara: Sanadka ugu dambeeya dugsiga sare Maadada diinta qeyb lugu barayo aadaabta guurka iyo waajibaadkiisa,
Ka dhiga sharci ahaan mid khasab ku ah in labada qof is guursanayo ay ka qayb galaan barnaamijyada lugu barayo akhlaaqiyaadka guurka. Dawlada Malaysia ayaa arintani dhaqan gelisay, kuna guuleysatay in ay yareyso furiinka badnaa ka jiray wadankooda.
(Hay’adaha Warfaafinta Soomalidu Leedahay (TVga, Raadiyaha, Wargeyska IWM)
Mar walba ku dara: barnaamijyo iyo maqaalo ka hadlaya guurka si shacabka aqoontooda loo kordhiyo. Ogowna barnaamijyadan oo kale baahi ayay shacabka u qabaan oo waxay badinaysaa akhristayaasha, dhagaystayaasha iyo daawadayaashiina. Ilaahayna ajar wuu idinka siinayaa.
Waxa haboon: In barnaamiyada iyo maqaalada uu ahaadaa mid miisaaman oo dhexdhexaad (Wasadhiya) raacayana akhlaaqda laga soo guuriyay Nabigeena suubanaa. Qof lagu daysadaa oo asaga ka fiican ma jiro AWC.
Walaalayaal, hadii aan qoray wax khalad ah la socda waxay ka timid nafsadayda daciifka ah iyo shaydaanka. Wixii sax ahna ilaahay xagii ayay ka timid asagaana mahad is ka leh.